induction heating theory - induction heating machine manufacturer | induction heating solutions
Kupisa kupisa ndiyo nzira yekudziya yemagetsi inoitisa chinhu (kazhinji simbi) nemagetsi, kupisa, kuburikidza nekupisa kunogadzirwa muchinhu nema eddy mafungu.
Categories Technologies Tags mabhesiki ekudziya kwekushisa, induction heat, Induction Heating Basics, induction heating principle, induction heat theory
iyo inokonzera kutengesa basa sei?
Chinhu chepamusoro-soro magetsi chinoshandiswa kutyaira ikozvino kuwedzera kwekushandiswa kuburikidza ne induction coil. Ichi induction heat coil inozivikanwa seirivha yebasa. Ona mufananidzo wakatarisana.
Ndima yezvino pane iyi induction heat coil inogadzira zvikuru uye inokurumidza kuchinja magnetic field munzvimbo mukati mebasa rekushanda. Basa rokugadzirisa rinopisa rinowanikwa mukati mekushandura kwakasimba kwemasimba.
Zvichienderana nemhando yezvinhu zvekushandira, zvinoitika zvinoverengeka…
Iko kushandura magnetic field inoita kuti ikozvino kuyerere mubasa rinoita basa. Urongwa hwebasa rakaoma uye workpiece rinogona kufungidzirwa semagetsi ekugadzirisa. Basa rokubata rakafanana nheyo umo magetsi anopa simba, uye workpiece yakafanana neyekushanduka kwechipiri iyo inopfupi-yakatenderedzwa. Izvi zvinokonzera kupisa kukuru kunopinda kuburikidza nebasa. Idzi dzinozivikanwa sezhizha dze eddy.
Pamusoro peizvi, huwandu hwepamusoro hunoshandiswa mukati Induction Heating zvishandiso zvinopa kukura kwechiitiko chinonzi skin skin effect. Iko ganda rinokonzera kushanduka kwemazuva ano kuti riyerere mucheka wakatetepa kumusoro webasa. Ganda racho rinowedzera kushanda kwakasimba kwesimbi kusvika kune imwe nzvimbo iripo. Saka inowedzera zvakanyanya kutengesa kupisa simba kwe induction heater inokonzerwa nezvino inowanikwa mubasa.
[pdf-inoisa mukati url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/08/induction_heating_principle-1.pdf" title = "induction_heating_principle"]
Categories Technologies Tags zvinyorwa zvekudzidzira kupisa basa, induction heat, induction heating principle, induction heat theory, magnetic induction heat